नियरबाई शेयर: दुई ओटा एन्ड्रोइड फोनहरुबीच कसरी फाइल सेयर गर्ने ? यस्तो छ सजिलो तरिका - Technology Khabar
» ताजा समाचार » नियरबाई शेयर: दुई ओटा एन्ड्रोइड फोनहरुबीच कसरी फाइल सेयर गर्ने ? यस्तो छ सजिलो तरिका
नियरबाई शेयर: दुई ओटा एन्ड्रोइड फोनहरुबीच कसरी फाइल सेयर गर्ने ? यस्तो छ सजिलो तरिका
जसरी एप्पल प्रयोगकर्ताहरु एयरड्रप (AirDrop) को मद्दतबाट एउटा आईफोनबाट अर्को आईफोनमा फाइल साझा गर्न पाउँछन्। गुगलले पनि एयरड्रपको जस्तै फिचर एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको लागी नियरबाई शेयर (Nearby Share) नाममा ल्याएको छ।
यो सुविधा गुगलले २०१९ मा उपलब्ध गराएको थियो, यद्यपि आज पनि धेरैजसो एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरु यो सुविधाको बारेमा अनभिज्ञ छन् र उनीहरु एउटा एन्ड्रोइड फोनबाट अर्को एन्ड्रोइड फोनमा फाइलहरु शेयर गर्न तेस्रो पक्षिय एप्स आदिको उपयोग गर्छन्।
डाटा सुरक्षा तेस्रो पक्षिय एपहरुका साथमा एक चिन्ताको विषय भएको छ। यस्तो स्थितिमा, नियरबाई शेयर फिचरले एन्ड्रोइड फोनमा यस्तो चिन्ताबाट मुक्त राख्नका लागी काम गर्दछ। नियरबाई शेयर सुविधाको माध्यमबाट, तपाईँ सजिलैसँग एक एन्ड्रोइडबाट अर्को एन्ड्रोइडमा फाइलहरु साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँले अझै यो सुविधाको उपयोग गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै तपाइँको फोनमा तेस्रो पक्षिय साझेदारी एप अनस्टल गर्नुहोस् र तल उल्लेखित चरणहरुको पालन गरेर नियरबाई शेयर फिचरको फाइदा उठाउनुहोस्।
नियरबाई शेयर (Nearby Share) सुविधा एन्ड्रोइड ६.० वा माथिको एन्ड्रोइड संस्करणका साथ आउँछ। यो सुविधा लगभग सबैको फोनमा पहिले नै राखिएको हुन्छ। यदि तपाइँँले अझै यो सुविधाको उपयोग गर्नुभएको छैन भने सबैभन्दा पहिले यो तपाइँको एन्ड्रोइड फोनमा कहाँ रहन्छ भन्ने थाहा पाउनुहोस्।
सबैभन्दा पहिले सेटिंग्समा जानुहोस् र तल स्क्रोल गर्नुहोस् र गुगल चयन गर्नुहोस्।
त्यस पछि डिभाइस कनेक्सन (Device Connections) मा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ स्क्रोलिङ्ग गरेर तपाईँले नियरबाई शेयर विकल्प पाउनुहुनेछ।
नियरबाई शेयरमा ट्याप गर्नुहोस् र सेटिंग्सलाई कस्टमाइज गर्नुहोस्।
तपाईँ यसलाई चालू वा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधाको उपयोग गर्नको लागी, तपाईँले डिभाइसको नामको साथसाथै गुगल खाताको चयन गर्नुपर्दछ।
नियरबाई शेयर: कसरी प्रयोग र फाइलहरु हस्तान्तरण गर्ने
पहिले तपाइँ जुन फाइल साझा गर्न चाहानुहुन्छ र त्यसमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि शेयरको आईकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाइँले नियरबाई शेयर विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्छ।
यसपछि तपाइँको फोनले निकटतम डिभाइसको लागी खोजी शुरू गर्नेछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि जसको साथ तपाइँ फाइल साझा गर्न चाहानुहुन्छ सो डिभाइसमा पनि नियरबाई शेयर फिचर सक्रिय भएको हुनुपर्दछ।
फोन पत्ता लगाएपछि, तपाइँले त्यो फोनको नाममा ट्याप गर्नुपर्छ। यस बीचमा, रिसीभर पनि फाइल स्वीकार गर्नको लागी तयार हुनुपर्नेछ।
त्यसपछि मात्र फाइल साझेदारी प्रकृया सुरु हुनेछ र प्रक्रिया केहि समयमा पूरा हुनेछ।